ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: “ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် - မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်” (ရုပ်သံ)
“ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် - မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်” (ရုပ်သံ)
Ba Ba U Win Tin,
We wish you long life.
You arearight person, say the truth forever.
We can change Burmese history with one hundred U Win Tin, five hundred Ne Myo Zin and one thousand Min Ko Naing.
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် မတော်မတရားလုပ်သူတွေကို အရေးယူနေရုံ မပြီးပါဘူး မတရားတဲ့ ဥပဒေ တွေကိုပါဖျက်သိမ်းဖို့ လိုပါသည်။
htoo naing aung said...
မတရား တဲ့ ဥပ ဒေ ကိုပါ မြန် မြန်ဖေါ်ထုတ် ပေး ပါဘ ဘရယ်